Fikradda naqshadaynta ee 24 Octopus Octopus Fikirka Naqshadda Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee 24 Octopus Aasaasiga Ragga iyo dumarka
Octopus wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ay inooga dhigayaan inaay ogaadaan dhulka. Marka qaan-gaaro dumar ah ay dhalaan ilamaha, waxay dhimataa oo ka tagtaa ilmaha si ay u noolaadaan. Sanadihii la soo dhaafay, dadku waxay isticmaaleen sawirrada qori-qoraalka ah si ay u sameeyaan bayaanno badan.
Tattoo octopus macnaheedu waa
Naqshadeynta tattoo-ka waxaa weeye wax la yaab leh oo ah sababta ay dadku u leeyihiin qaybo kala duwan oo jirkooda ah. Tattoo waa mid adag oo tani waa sidoo kale sida ay u mataleyso waxyaabo kala duwan. Shakhsi ahaan ama khiyaanada qarsoodiga ah ee qotada dheeraadka ah waa waxa ku daraya dabeecadaha qoriga. Sifooyinka qadiimiga ah ayaa sheegaya in 8 ay tahay tiro nambaro badan oo nolosha ah. Tani waa sababaha abuuray sideed lugood waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin awood. Octopus wuxuu ku dhex jiraa qaybtaan oo ah xayawaanka mugdiga ah. Octopus #tattoo macnaheedu wuxuu ka yimid awoodda addimada si ay u soo noqoto. Tattoo wuxuu noqon karaa dib-u-kicinta iyo dib-u-nooleynta.
Dad badan ayaa isticmaala si ay u rumaystaan ​​in daboolkooda la tirtiri karo. Tattoo octopus ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in ay rajo ka qabaan mustaqbalka. Awoodda qotada dheeraadka ah ee waxtarka badan leh ee adduunkoodu waa waxa dadka ka dhigaya in ay aaminsan yihiin in abuurku yahay mid isku dhafan. Waxay caddaynaysaa in tattoo loo yaqaan 'tctoo octopus' loogu talagalay kuwa u baahan in dib loo furo. Tattoo waxaa loola jeedaa si cajiib ah, qurux badan iyo tiro yar. Naqshadeynta joornaalku waxay sidoo kale ka dhigeysaa waxa ay ka dhigeyso dad badan sababta oo ah awoodda ay u leeyihiin inay abuuraan taageero.
1. Fikradda naqshadaynta cagaarka ah ee cagaarka ah
Tattoo ayaa noqotey qaab muuqata in bani-aadmigu uu ku dhacay jacayl sanado badan. Dunidan maanta, ma jirto meel aanad ka arki doonin farshaxanada tattoo kaa caawinaya raga iyo dumarka inay noqdaan kuwo la jilicsan karo oo leh sawirrada jilicsan ee naqshadaha kala duwan.
2. Tattoo qoob-ka-cayaar ah oo cufan ah # oo gacanta ku jirta
Maaha wax la yaab leh in ninka badanaa xanuun ka dareemo, laakiin wuxuu jecel yahay raaxada. Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado calaamad loo yaqaan 'tctopus tattoos', ayaa dhabarka u ah. Habka loo yaqaan 'tctoo tattoo' waxaa loo sameeyay qaabka farshaxanka hal-abuurka ah ee jidhka bini'aadamka.
3. Fikradda dharbaaxada cirridiga ah ee garabka
Laga soo bilaabo dhaqaajinta walxaha aan nooleyn, waxaynu aragnay waxyaabo badan oo ku jira qaybo kala duwan oo jirka ah.
4. Qodobka casriga ah Fikradda tattoo ee caarada
Markaad diyaar u tahay inaad gasho, waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad fahanto. Waxaa jira laba nooc oo ah tattoosyada qotada dheeriga ah; joogta ah iyo ku meelgaarka ah.
5. Fikradda sawir-qaadashada naqshadda ah ee foornada ah ee garabka
Si joogta ah looma cadeeynayo marka laga reebo hannaanka xannuunada xanuunka ah inta ay si ku-meel-gaar ah uga bixi karto. Waa in aad fahamsan tahay in quruxda tattoo foostada ah lagu jiifiyo gacanta farshaxan.
6. Fikradda jilicsan ee fiyuusiga ah ee ku saabsan garabka haweenka
Haddii aad joojisid isticmaalka adeegyada adeega sawir-qaadaha aan tayada lahayn, waxaa laga yaabaa in lagu burburiyo naqshadaha xun ee jidhkaaga. Tani waa sababta ay muhiimka u tahay in aad u tagto farshaxan tafaarig ah oo tiknoolaji ah.
7. Octopus fikradda tattoo ku saabsan lugta dumarka
Online waxay leeyihiin farshaxan farabadan oo tiknoolajiyaal ah oo kaa caawin kara inaad isdhex gashid jirkaada.
8. Tartoo jilicsan oo loo yaqaan 'clam "
Markaad rabto inaad isbeddel ka sameysid sawirada tattoo ah sida tan, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la fahmo qaabka qaabka tattoo loo yaqaan 'tctoo design talk'. Waxaa laga yaabaa in aad dhamaato helitaanka tattoo fiiqan oo macnaheedu uusan ahayn waxa aad filayso.
9. Fikradda quruxda badan ee loo yaqaan 'sweetheart'
Mudanayaasha lagama tagin qaabkan farshaxan. Markaad rabto in aad u eegto si aad u fiican oo ka wanaagsan, tattoo fiiqan ayaa kuu qaban kara shaqada. Waxaan aragnay tattoos farabadan oo loo yaqaan 'octopus tikniko ah' kuwaas oo la sawiro si loogu soo jiito qof kasta oo dareenkiisa.
10. Fikradda naqshadaynta jilicsan ee quruxda leh ee ragga
Markaad haysatid tattoo fiiqan oo kale ah, mar dambe laguma masaxin dadweynaha. Tartoo fiiqan sida tan waa wax aad rabto inaad haysato sababtoo ah si wanaagsan ayaa loo sawiraa oo qurux badan si aad u aragto.
11. Fikradda taatufada ugu fiican ee ragga
Sidee u jeceshahay naqshadeynta taatuusha ah? Muhiim maaha waxa aad qabatid ama meesha aad ku imanayso tattoo fiiqan sidan oo kale. Marka aad hesho taatuqaadka qotada dheeriga ah, waxaad u jeesaneysaa sababtoo ah quruxda ku xiran.
12. Fikradda taatufada gacanta oo dhan gacanta ku taal
Maxaad u maleyneysaa? Dad badan ayaa isticmaalaya tattookskan xabbad joojinta ah waxayna ku darayaan naqshad badan.
13. Tartanka qotomiska ah ee qotada dheer ee garabka dumarka ah
Oktoobar waxaa loo yaqaanaa xirfadahooda xalinta dhibaatada, xasuusta, barashada aragti, iyo aragooda isha. il image
14. Octopus fikradda naqshadeynta sawirada ee xabadka
Waxaa loo yaqaanaa inay noqdaan kuwo jilicsan, sababtoo ah waxay ka ilaaliyaan dadka kale xayawaanka. Dad badan oo isticmaala tattoo marwalba way istaagaan marka ay soo baxayaan. Habka loo yaqaan 'chopper' loo yaqaan 'junctus' waxaa loogu talagalay dadka waa mid xiiso leh. il image
15. Garbaha iyo laabta laabta ragga
Marka ay timaaddo naqshad tamaandhiga ah oo qaas ah oo dareen muuqaal ah ka dhigi doonta dadweynaha, waxaad tagtaa tattoo fiiqan. il image
16. Nimanka ragga ee feerka naqshadaynta sawir-gacmeedka
Waa inaad heshaa tattooist wanaagsan haddii aad rabto in aad u aragto mid gaar ah leh faqrigaaga. Maalin kasta ma aragno dadka ku nool xaafadaha. Tani waa sababta aad u tegi lahayd marka aad raadineyso wax aan caadi ahayn ee naqshadeynta tattoo. il image
17. Dumarka oo dharbaaxo jilicsan
Waxaad u isticmaali kartaa midabada quruxda badan ee aad ku nooshahay. Waa inaadan ka soo jeedin qoys madax ka ah in aad u isticmaashid naqshadahan quruxda badan sida tattookaaga. il image
18. Fikradda sawir-gacmeedyada fiidmeerka ah ee ku saabsan haweenka dib u celinta
Quruxda qorraxdu waxa laga arki karaa qayb kasta oo ka mid ah jirkaaga. Naqshadaynta joornaalkaaga ayaa go'aansan kara adiga. Adiga ayaa ah inaad adigu u qoondeeysid qotomiskaaga ku yaal qaybta jirkaada ee aad rabto. il image
19. Fikirka tattoo fekerka ah ee quruxda badan ee ragga
Tijaabadu waxay noqon kartaa qiyaaso iyo qaabab kala duwan oo ku xiran qaybta jirka ee aad rabto inay noqoto. Markaad haysato octopus qayb kasta oo ka mid ah jirka oo u furan dadweynaha, qaybtan ayaa ah waxa aad u fiirsan doonto inaad u baahan tahay. il image
20. Fikradda taatufada gacanta ee farsamada gacanta oo dhan
Waxaa jira siyaabo fara badan oo aad u isticmaali karto fiilooyinka qoraaga si aad u muujiso farriimaha. Waxaad ku dari kartaa iskutallaabta udubdhexaadka ah iyo waxay noqon doontaa guul. il image
21. Tattoo qurux badan oo loo yaqaan 'sweetheart'
Tani waxay ka dhigan tahay in iskutallaabta la rumeeysan yahay inay tahay ilaahi oo u horseedi doonta jihada saxda ah. Qodob kasta oo ka mid ah qoraalladu waxay noqon karaan waxyaabo kala duwan oo ku xiran waxa uu qofku rabo inuu soo bandhigo. il image
22. Fikradda dhogorta xayawaanka ku dhajisey indhaha haweenka
Helitaanka tattoo octopus ayaa lagu farxi karaa markaad ku darto naqshado kale. Qayb ka mid ah jirka aad ku habeyn doonto tattoo-gaaga ayaa ah waxa lagu ogaanayo xajmiga iyo qaabka aad ujoogsatid. il image
23. Dumarka quruxda badan ee quruxda badan leh
Waxaad sameyn kartaa bayaan aad u weyn marka aad samaynayso naqshad weyn oo ku saabsan dhabarka ama laabta. Ma jiro qayb ka mid ah jirka oo ah taatuuga jilicsan ee aan ku habboonayn. il image
24. Fikradda sawir-gacmeedka ah ee dharbaaxada ah ee ragga
Halkan guji halkan Tattoos badan oo caan ah
Tags:tattoo ah octopus
shimbir shimbirfikradaha tattootattoos iskutallaabtatattoo tilmaanTattoos Wadnahatattoos cagtaDhaqdhaqaaqatattoos sleevetattoo indhahasawir gacmeedsawirrada raggatattoo biyo ahlibto libaaxgaraacista gacmahatattoosTattoo Feathergadaal u laabosawirada gabdhahatattoos qabaa'ilkatattoos taajkiimuusikada muusikadawaxaa la dhajiyay tattoossawirada malaa'igtajimicsiga bisadahakoi kalluunkatattoos ubaxcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtaraagada kubbaddahenna tattooarrow Tattootattoo ah octopustattoos qosol lehnaqshadeynta mehndiJoomatari Tattoostattoos saaxiib saxa ahtattoos qoortawaxay jecel yihiin tattoosshaatiinka shiidantattoos qorraxdaTartoo ubax badanku dhaji tattoostattoo maroodigaTattoo infinitytattoos gacantalammaanahalaabto laabtatattoos eagletattoos moontattoo dheemanTilmaamta jaalaha ah